पादको गन्धले लामखुट्टे म’रेपछि, पाद्‍ने जागिरै पाए यी व्यक्तिले ! - Kohalpur Trends
एजेन्सी। एक व्यक्तिको विषाक्तका पादका कारण लामखुट्टै म’रेका छन् । यो सत्य घटना हो । ती व्यक्तिको पादको विषाक्तका कारण लामखुट्टे म’रेपछि वैज्ञानिकहरुले पादमा पाइएको रसायनबारे अनुसन्धान सुरु गरेका छन् ।ती व्यक्तिले पादेपछि त्यसको असर ६ मिटरसम्म फैलिने गरेको छ । पादको विषाक्त फैलिएको ठाउँमा लामखुट्टेलगायत विभिन्न स-साना कि’राहरु म’र्ने गरेका छन् । द मिररकाअनुसार यी व्यक्तिले आफ्नो पादका कारण लामो समयदेखि स–साना कि’राहरु म’र्ने गरेका बताएका छन् ।
अफ्रिकाको युगाण्डाका ४८ वर्षीय वामिरामाको पादले लामखुट्टे म’रेको हो । पादले लामखुट्टे म’रेपछि एक कम्पनीले उनलाई एक कोठामा राखेर पाद संकलन गरेको छ । उनी जागिरेका रुपमा कोठामा जाने र पाद्‍ने गर्छन् ।कम्पनीले पादबाट नयाँ कि’टनाष’क औषधि बनाउने विषयमा अध्ययन गरिरहेको छ । अरु केही वैज्ञानिकलेसमेत पादको अध्ययनका लागि रकम दिएर उनको पाद लगेर गएका छन् ।
पादका कारण युगाण्डाका यी व्यक्तिले आफ्नो गाउँलाई मलेरिया मुक्त बनाइसकेका छन् । पादमा पाइएको विषाक्त ग्यासका कारण आफ्नो गाउँ मलेरियाबाट मुक्त भएको स्थानीयले बताएका छन् ।यी व्यक्तिले सामान्य खानेकुरा खाने गरेको बताएका छन् । दैनिक नुहाउने उनी जहाँ गएर पाद्‍ने काम गर्छन्, त्यहाँका लामखुट्टे मर्ने ग’रेको स्थानीयले बताएका छन् ।
स्थानीय नागरिकले लामखुट्टेको स’मस्या भएमा उनलाई आफ्नो घरमा बोलाउने गरेका छन् । यी व्यक्तिले पादेको लामो समयसम्म पनि लामखुट्टे उक्त ठाउँमासमेत नजाने गरेको स्थानीयको भनाइ छ ।
The submit पादको गन्धले लामखुट्टे म’रेपछि, पाद्‍ने जागिरै पाए यी व्यक्तिले ! appeared first on The Buddha Khabar.
Previous Previous post: भेटियो साई बाबाको दु’र्लभ तस्विर दर्शन गर्दै ॐ लेखी शे’यर गर्नुहोला मनले सोचेको सबै पुग्नेछ
Next Next post: थप ३३०९ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि